OTU ESI JIKỌỌ ỌṄỤ NA KỌMPUTA - WINDOWS - 2019
Ọ bụghị ihe egwuregwu kọmputa, karịsịa ndị na-esi na consoles, na-ejikwa iji keyboard na òké dị mfe. N'ihi nke a, nakwa maka ụfọdụ ndị ọzọ, ọ nwere ike ịdị mkpa iji jikọọ na ịhazi egwuregwupad na PC.
Ijikọ gamepad na PC
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike jikọọ kọmpụta nkịtị na ụdị egwuregwu ọ bụla nke nwere nkwụ USB kwesịrị ekwesị. Ngwaọrụ nwere ike jikọọ na njikọ ndị ọzọ, ma na nke a, usoro ahụ kwesịrị ka e nwee isiokwu dị iche.
Rịba ama: Egwuregwu na ọṅụ bụ ndị na-achịkwa ụdị abụọ dịgasị iche iche, ha dị iche na usoro ha na-ahụ. Enwere ike ịchọta nkọwa gbasara nke a na oghere oghere nke netwọk ahụ, lee anya na ihe oyiyi ha.
Nhọrọ 1: DualShock 3 si na PS3
Egwuregwu PlayStation 3 na-akwado Windows, chọrọ naanị nbudata na ntinye nke ọkwọ ụgbọala pụrụ iche. Usoro nke ijikọta ụdị onye nlekọta na kọmputa, anyị tụlere na isiokwu kwekọrọ na saịtị ahụ.
Gụkwuo: Otu esi ejikọ egwuregwu game site na PS3 na PC
Nhọrọ 2: DualShock 4 si PS4
E nwere ike jikọọ Gamepad site na PlayStation 4 consoles na ọtụtụ ụzọ, dabere na ike nke kọmputa gị na mmasị onwe gị.
Rịba ama: Na-enweghị wụnye ndị ọkwọ ụgbọala pụrụ iche, naanị ọrụ ndị bụ isi na-adịkarị.
Njikọ na-ekpo ọkụ
Jikọọ eriri USB ahụ na njikọ ahụ n'elu ngwaọrụ ahụ.
Pọpọ USB na azụ nke waya ga-ejikọta na ọdụ ụgbọ mmiri kwekọrọ na kọmputa.
Mgbe nke ahụ gasị, otu ụbọchi kwesịrị ịgbaso ma nhazi ngwa ngwa nke software dị mkpa ga-amalite.
Na ngalaba "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ" egwuregwu ga-egosipụta na listi ngwaọrụ ejikọrọ.
Jide akara bọtịnụ maka sekọnd ole na ole. "PS" ma "Ekekọrịta".
Mgbe Bluetooth gbanwere nke ọma, ìhè ọkụ ga-agbanye ọkụ.
Mgbe ị wụnye ọkwọ ụgbọala Bluetooth na kọmputa gị, rụọ ọrụ ya.
Gụkwuo: Otu esi agbanye Bluetooth na PC
Mepee windo ọchụchọ maka njikọ ọhụrụ ma họrọ "Njikwa Ala Ikuku".
Usoro ga ewe oge iji budata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile dị mkpa.
Rịba ama: Mgbe ejikọtara, jiri koodu ahụ "0000".
N'ọnọdụ ụfọdụ, karịsịa maka njikọ ikuku, ndị ọkwọ ụgbọala maka egwuregwu ga-arụ ọrụ na aka. Ịnwere ike ibudata ngwanrọ ịkwesiri iji rụọ ọrụ site na njikọ nke anyị nyere.
Download DualShock 4 ọkwọ ụgbọala maka Windows
Pịa bọtịnụ "Download ugbu a"bulite faịlụ "DS4Windows".
Wepu ọdịnaya nke Archive na ebe ọ bụla.
Site na họrọ nchekwa, na-agba ọsọ "DS4Windows".
Na window mbụ, họrọ otu n'ime nhọrọ maka ichekwa faịlụ na ntọala ihe omume.
Pịa taabụ "Ntọala" wee pịa njikọ ahụ "Njikwa / Ọkwọ ụgbọala Ọkwọ ụgbọala".
Pịa bọtịnụ ahụ "Wụnye ọkwọ ụgbọala DS4"ịmalite itinye software maka ngwaọrụ ahụ.
Kwesịrị iji aka gị kwenye na echichi ngwanrọ ọhụrụ.
Mgbe ọdịdị nke aha ahụ dị "Wụnye Complete"pịa bọtịnụ ahụ "Emecha".
Ihe omume a na - enye gị ohere ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka DualShock 4, kamakwa iji hazie bọtịnụ ọrụ.
Anyị nwere olileanya na ị jisiri ike jikọọ ma hazie egwuregwu ahụ site na PlayStation 4.
Nhọrọ 3: Xbox 360 na Otu
Dị ka ọ dị banyere PlayStation, egwuregwu ndị dị na Xbox 360 na otu nkwekọrịta zuru ezu na usoro Windows sistemụ arụmọrụ na enwere ike iji ya dochie anya òké na keyboard na egwuregwu kọmputa. N'otu oge ahụ, njikọ njikọ n'onwe ya na-adabere n'ụdị onye njikwa.
Hụkwa: Download Xbox 360 egwuregwu ọkwọ ụgbọala
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji jikọọ onye nwekọrịta wired, ihe achọrọ achọrọ iji jikọọ plọsụ USB na njikọ kwesịrị ekwesị. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịchọ ka ọ bụghị naanị ị jikọọ, kamakwa ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala.
N'ihe banyere Xbox One gamepad, ị ga-achọ kaadị "USB - Micro USB", nke a ga-ejikọrọ na njikọ kwekọrọ na ikpe ahụ.
Na eriri USB na kọmputa ahụ, jikọọ eriri ahụ site na ngwaọrụ ahụ.
Emekarị ka ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na nke a anaghị eme, site na menu "Malite" oghe ngalaba "Onye njikwa ngwaọrụ".
Rịba ama: Windows 10 site na ndabara bụ nke zuru ezu na Xbox One gamepad na ọ dịghị achọ nkwụnye software.
Gbasaa ndepụta "Njikwa Microsoft Xbox One" ma jiri aha gamepad pịa okpukpu abụọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, akara a chọrọ dị ka "Njikọ nkekọrịta (Microsoft) maka klas Windows" ma ọ bụ "Xbox 360 Ụlọ Elu".
Na mpio nke meghere, gaa na taabụ "Ọkwọ ụgbọala" wee pịa "Nwee ume".
Ugbu a, ị ga-ahọrọ "Nchọgharị akpaaka maka ndị ọkwọ ụgbọala emelitere". Ị ga-achọ njikọ Ịntanetị.
Mgbe ahụ ọ na-anọgide na iji wụnye ọkwọ ụgbọ ala ahụ.
Mgbe ịmechara usoro ndị a kọwara, a ga-enyocha ngwaọrụ ahụ n'egwuregwu ọ bụla kwesịrị ekwesị.
Ewezuga iji eriri USB, Xbox One gamepad nwere ike jikọọ na kọmpụta na-enweghị iji wires. Otú ọ dị, maka nke a, na mgbakwunye na ngwaọrụ ahụ n'onwe ya, ịchọrọ nkwụnye Xbox One pụrụ iche maka Windows.
Jikọọ nkwụnye ihe a zụrụ azụ na kọmputa USB.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, jiri onye na-agbapụta ihe na-abata na kit ahụ ka a na-etinye nkwụnye ahụ n'ihu onye ọrụ ahụ.
Na akụkụ nke eriri USB, pịa bọtịnụ.
Mgbe nke ahụ pịa bọtịnụ etiti ahụ. "Xbox" na ngwaọrụ.
Na usoro nke ijikọta ihe ngosi na egwuregwupad na nkwụnye ọkụ kwesịrị ịgba ọkụ. Mgbe ha na-aga nke ọma, ha ga-ere ọkụ ruo mgbe niile.
Nhọrọ 4: Ụdị ndị ọzọ
Na mgbakwunye na iche iche dị n'elu, enwekwara ndị na-achịkwa ndị na-adịghị emetụta mgbakọ. Ị nwere ike jikọọ ọṅụ ahụ na-eji ntụziaka ndị ahụ dị n'elu.
Ọ kacha mma iji nweta otu egwuregwupad na nkwado nkwado "DirectInput" ma "XInput". Nke a ga-enye gị ohere iji ngwaọrụ ahụ n'ọtụtụ egwuregwu, ebe ịnwe ikike ịhazi bọtịnụ ahụ.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ịchịnye mgbakwunye ngwanrọ adịghị achọrọ. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-ezu iji wụnye ọkwọ ụgbọala site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nrụpụta ma ọ bụ disk na-eso.
Iji zere nsogbu na nkwado egwuregwu na egwuregwu na arụ ọrụ na-ezighị ezi nke ụfọdụ bọtịnụ, ị nwere ike iji usoro x360ce. Ngwaọrụ a ga-enye gị ohere iji aka gị gbanwee nhazi nke onye ọrụ ma melite njikọ na egwuregwu.
Download x360ce site na saịtị gọọmentị
Tụkwasị na nke a, software a na-enye gị ohere ịlele arụmọrụ nke egwuregwu na-ejikọtaghị na-agba ọsọ ngwa kwesịrị ekwesị.
Ọ bụrụ na ọ bụla nsogbu ma ọ bụ ajụjụ bilitere n'oge ọhụụ, biko kpọtụrụ anyị na nkwupụta.
Hụkwa: Otu esi ejikọ ụgbọelu ahụ na PC
N'iji omume ndị a kọwara n'isiokwu a, ị nwere ike jikọọ egwuregwupad ọ bụla kwesịrị ekwesị na kọmputa gị. N'okwu a, isi ọnọdụ maka njikọ ọganihu bụ ndakọrịta nke ngwaọrụ ahụ na egwuregwu kọmputa.